Ufukula osomabhizinisi nabesifazane
BONISWA MOHALE | October 10, 2019
UZIBOPHEZELE ekufukuleni abesifazane uNksz Amanda Swana oyisikhulu esiphezulu sePowerpoint Lifestyles, okuyinkampani esiza amabhizinisi ngezisombululo zakwandabazabantu.
I-Powerpoint Lifestyles inabasebenzi besifazane abangu-90% abesilisa babe ngu-10%.
UNksz Swana uthe uyakholelwa kubantu besifazane futhi ufuna babe sezikhundleni eziphezulu ukuze kube noshintsho oludingekayo ezinkampanini ezehlukene.
“Ngiyathanda ukuthi abantu besifazane babe sezikhundleni eziphezulu ukuze bakwazi ukukhuluma ngezinto ezibalulekile kwezomnotho. Kubalulekile ukuthi njengomuntu okholelwa kubantu besifazane ngibe yisibonelo salokhu. Bayadingeka abaholi besifazane ezinkampanini ezinkulu, siyabadinga ukuthi babe yizikhulu eziphezulu, babe ngabaqondisi ukuze kukhule umnotho.”
UNksz Swana wazalelwa eLusikisiki, e-Eastern Cape, kodwa abazali bakhe bathuthela eThekwini ngo-1998 ukuze akwazi ukufunda.
Ufunde eDurban Academy eseBluff, wenza iziqu zeMaster’s in Social Science lapho ephume ne-Industrial Psychology eNyuvesi yaKwaZulu-Natal.
I-Powerpoint Lifestyles uyisungule ngo-2015 ngenhloso yokusiza abafundi ukuze bakhule emisebenzini yabo kodwa wagcina esethuthukile kangangokuthi amabhizinisi ayesefuna eze nezinhlelo ezizosiza abasebenzi bawo.
UNksz Swana uyakwazi ukusungula izinhlelo zokuhlola abasebenzi, ezokuheha ithalente elifanele enkampanini ethile nokululeka abasebenzi.
Uphinde asize izinkampani zaKwaZulu-Natal nezaseGauteng ngezisombululo zakwandabazabantu.
Uphinde asebenzisane nezinkampani ezehlukene ukuze ahlale azi yonke imithetho ethinta ezakwandabazantu.
Osomabhizinisi abancane uyakwazi ukubasiza ngamakhono azokwenza kube lula ukuthi bangenise imali, bagcine abasebenzi bejabule ngaphandle kokwandisa izindleko.
Phakathi kwezinye izinto azenzayo ezisiza amabhizinisi ubale iRecruitment and Selection/Placements, Job Evaluation and Job Grading, Performance Management, Human Resources Administration and Payroll Management, Drafting Policies and Procedures, EE Reporting.
Ekhuluma ngezingqinamba abhekane nazo ngesikhathi esungula inkampani yakhe ubalule ukuthi babedinga ihhovisi ngoba babefuna ukubonisa amakhasimende abo ukuthi bangabantu abathembekile.
Uveze ukuthi abanikazi bamahhovisi babefuna isitatimende seminyaka emithathu kuya kwemihlanu noma irenti yezinyanga ezintathu ngaphambi kokubaqashisela ihhovisi.
Lokhu uthi kwakubafakela ingcindezi ngoba kwakufanele basebenze kanzima.
Enye ingqinamba uthe bekuwukuqhamuka nohlelo lokukhangisa olusezingeni ukuze bathole amakhasimende amaningi.
Izingqinamba bazinqobe ngokuthi bafunde, bacwaninge kakhulu bese beza nezinsiza ezizothuthukisa ezakwandabazabantu ezinkampanini.
Uthe umsebenzi wabo osezingeni eliphezulu ubasize ukuthi basheshe ukukhulisa isibalo samakhasimende.
Baphinde bacele amakhasimende abo ukuthi abatshele ngempatho yabo nokuthi yikuphi akudingayo.
Ukuba nebhizinisi kuyaziwa ukuthi kunzima kanti uNksz Swana uthe uye achithe isikhathi nomndeni wakhe ikakhulukazi abantu abahlale bemgqugquzela bemkhombisa nothando.
Ubuye avakashele izindawo ezehlukene lapho efunda ngamasiko abantu.
Uyathanda nokuxoxa nabantu uma evakashile ukuze athole indlela abaphila ngayo.
Iziqu zakhe ze-Industrial Psychology uthe ziyamsiza kakhulu ebhizinisini ngoba kulula ukuqhamuka nezixazululo ezisiza kwandabazabantu.
Ugqugquzele abesifazane wathi ababone ukuthi i-4th Industrial Revolution isifikile ngakho mabenze amabhizinisi abo ahambisane nobuchwepheshe bahlome ngolwazi olufanele.